Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यज्ञमा हवन गर्दा ‘स्वाहा’ किन भनिन्छ ? यस्तो छ रहस्यमय कारण - Pnpkhabar.com
यज्ञमा हवन गर्दा ‘स्वाहा’ किन भनिन्छ ? यस्तो छ रहस्यमय कारण
एजेन्सी : ‘स्वाहा’को महत्व हामीमध्ये धेरैजनालाई थाहा न हुन्सक्छ। ऋग्वैदिक आर्यहरुले यज्ञ गर्ने परम्पराका दौरान देवतासमक्ष हवन गरिएकाे सामग्री पुर्याउनका लागि अग्निको प्रयोग आरम्भ गरे। किन्तु यज्ञ वेदीमा हवन गर्ने बेला ‘स्वाहा’ शब्दको उच्चारण गरिन्थ्यो । वास्तवमा ‘स्वाहा’को अर्थ आफैंमा धेरै रोचक छ।